Iwu nkwụghachi - arcorarobinet
Welcome / Politique de remboursement
Anyị nwere usoro iwu ịlaghachi ụbọchị 30 nke pụtara na ị nwere ụbọchị 30 mgbe ị natachara ihe gị iji rịọ maka nloghachi.
Iji ruo eruo maka nloghachi, ihe gị ga-adị n'otu ọnọdụ ị natara ya, akpachapụghị anya ma ọ bụ ejighi ya, yana mkpado yana na ngwungwu mbụ ya. Ga-achọ nnata ma ọ bụ akaebe nke nzụta.
Iji bido ịlaghachi, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na service@arcorafaucet.com. Ọ bụrụ na a nabatara nloghachi gị, anyị ga-ezitere gị aha mbugharị mbugharị, yana ntuziaka ka esi aga yana iziga ngwugwu gị. Ihe ndị eweghachitere anyị n’ebughị ụzọ rịọ maka nloghachi agaghị anabata.
Nwere ike ịkpọtụrụ anyị maka ajụjụ nlọghachi ọ bụla na service@arcorafaucet.com.
Mmebi na nsogbu
Biko lelee iwu gị mgbe ị nwetara ma kpọtụrụ anyị ozugbo ma ọ bụrụ na ihe ahụ nwere nkwarụ, mebiri emebi, ma ọ bụ na ị nwetara ihe na-ezighi ezi, ka anyị wee nwee ike nyochaa nsogbu ahụ ma mezie ya.
Ihe ndị ọzọ / anaghị eweghachite
Typesfọdụ ụdị ihe enweghị ike ịlaghachi, dị ka ngwaahịa na-emebi emebi (dịka nri, ifuru, ma ọ bụ osisi), ngwaahịa ndị ahaziri (dịka iwu pụrụ iche ma ọ bụ ihe ndị ahaziri iche) na ngwaahịa nlekọta onwe onye (dịka karịa ngwaahịa mma). Anyi anaghi anabata mbughari nke ihe ojoo, mmiri oku ma obu oku. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nchegbu gbasara otu ihe gị.
O di nwute, anyi enweghi ike inabata nloghachi nke ire ihe ma obu kaadi onyinye.
Zọ kachasị ọsọ iji hụ na ị nwetara ihe ịchọrọ bụ ịlaghachi ihe ị nwere, ma ozugbo a nabatara nloghachi ahụ, mee nzụta dị iche maka ihe ọhụrụ ahụ.
Anyị ga-agwa gị ozugbo anyị natara ma nyochaa nloghachi gị wee mee ka ị mara ma akwadola nkwụghachi ma ọ bụ na akwadoghị. Ọ bụrụ na-akwadoro, ị ga-akpaghị aka nkwụghachi ụgwọ gị mbụ ugwo usoro. Buru n'uche na ụlọ akụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ kaadị kredit nwere ike iwepụta oge iji hazie ma tinye ọkwa nkwụghachi ahụ.